Sudoku.com - Free Game 2.1.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.1.2 လြန္ခဲ့ေသာ3လက
ဂိမ္းမ်ား ဘုတ္ Sudoku.com - Free Game
Sudoku.com - Free Game ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Our classic sudoku puzzle has some features that make the game easier for you: hints, auto-check, and highlight duplicates. What's more, in our app each sudoku puzzle game has one solution. You will find all you need whether you are solving your first sedoku, or you've progressed to expert difficulty. Choose any level you like!
အရင်ကဆိုရင်နှင့်အဆင့်မြင့်ကစားသမားများအတွက် Sudoku ။ ဟုတ်မဟုတ်ကိုသင်အနားယူသို့မဟုတ်တက်ကြွစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ချင်ပါတယ် - sudoku အခမဲ့ပဟေဠိဂိမ်း နှင့်သာယာသောလမ်းအတွက်အချိန်လွန်သွား! သေးငယ်တဲ့လှုံ့ဆော်ချိုး Get သို့မဟုတ် sudoku ပဟေဠိ app ကိုနှင့်သင်၏ဦးခေါင်းကိုရှင်းလင်းပါ။ သငျသညျသွားလေရာရာ၌သင်တို့နှင့်အတူအသင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းကိုယူပါ။ မိုဘိုင်းအပေါ် sudoku ကစားအမှန်တကယ်ခဲတံနှင့်စာရွက်နှင့်အတူသကဲ့သို့ကောင်းလှ၏။
Sudoku.com 5000+ ကွဲပြားခြားနားသော sudoku ပဟေဠိရှိပါတယ်! သင့်ဦးနှောက်, ယုတ္တိစဉ်းစားတွေးခေါ်များနှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုလေ့ကျင့်ဖို့နေ့စဉ် sudoku ပဟေဠိ၏လွယ်ကူသောအဆင့်ဆင့် Play, သို့မဟုတ်သင့်စိတ်ကိုအမှန်တကယ်လေ့ကျင့်ခန်းပေးရန်ခက်ခဲအဆင့်ဆင့်ကြိုးစားကြည့်ပါ။
သဲလွန်စ, Auto-စစ်ဆေးမှုများနှင့်မီးမောင်းထိုးပြထပ်တူများကို: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂန္ sudoku ပဟေဠိသင်တို့အဘို့ဂိမ်းပိုမိုလွယ်ကူစေပါအချို့ features တွေရှိပါတယ်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ထဲတွင်တစ်ခုချင်းစီ sudoku ပဟေဠိဂိမ်းတဦးတည်းဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ်။ သင်ပထမဦးဆုံး sedoku ဖြေရှင်းနေကြသည်, သို့မဟုတ်သင်ကျွမ်းကျင်သူအခက်အခဲတဲ့အထိတိုးတက်င့်ခြင်းရှိမရှိကိုသင်လိုအပ်သမျှကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်မဆိုအဆင့်အထိကိုရွေးချယ်ပါ!
✓အပြီးအစီး နေ့စဉ် Sudoku စိန်ခေါ်မှုများ ထူးခြားတဲ့ဆုဖလားရဖို့
✓သင်သွားကဲ့သို့သင်တို့အမှားတွေကြည့်ရှုရန်သင့်အမှားတွေကိုထုတ်ရှာဖွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိန်ခေါ်မယ့်, ဒါမှမဟုတ် enable auto-Check
✓✍စာရွက်ပေါ်တွင်အဖြစ်မှတ်စုအောင်မှတ်စုများ ကိုဖွင့်မည်။ သင်တစ်ဦးကလာပ်စည်းများတွင်ဖြည့်ပါတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်, မှတ်စုများကိုအလိုအလျောက် update လုပ်ကြသည်!
✓ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာထပ်တူများကို တစ်တန်း, ကော်လံနှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်နံပါတ်များကိုထပ်ကျော့ရှောင်ရှားရန်
✓ အရိပ်အမြွက် ကိုသင်ဖမ်းအခါအချက်များအားဖြင့်သင်တို့ကိုလမျးညှနျပေးနိုငျ
- စာရင်းအင်းများ ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအခက်အခဲအဆငျ့အဘို့သင့်တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံ: သင်၏အကောင်းဆုံးအချိန်နှင့်အခြားအောင်မြင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
- Unlimited undo ။ အမှားလုပ်? ရုံအလျင်အမြန်ပြန်ထား!
- အရောင် themes များ ။ ပင်မှောင်မိုက်၌ပိုမိုသက်သာခြင်းနှင့်ကစားရန်သုံးပွဲတစ်ဦးကိုရွေးချယ်ပါ!
- Auto-ကယ်တင် ။ သငျသညျမပြီးဆုံးသေးသော sudoku ဂိမ်းစွန့်ခွာလျှင်, ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ အချိန်မရွေးကစား Continue
- ရွေးချယ်ထားသောဆဲလ်နှင့်ဆက်စပ်သောတစ်တန်း, ကော်လံနှင့် box ရဲ့ ကိုပျေါလှငျ
- Eraser ကို ။ အမှားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ Get
•အခမဲ့ကျော် 5000 ကောင်းစွာ-ဖွဲ့စည်းခဲ့ sudoku ပဟေဠိ
• 9x9 ဇယားကွက်
အခက်အခဲ4ဿုံမျှမျှတတအဆင့်ဆင့်•။ ဒီ app sudoku အရင်ကဆိုရင်နှင့်အဆင့်မြင့် sudoku ကစားသမားနှစ်ဦးစလုံးအတွက်သင့်တော်ပါ! သင့်ဦးနှောက်ကိုလေ့ကျင့်သို့မဟုတ်ခက်သို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်သူ sudoku ကိုရှေးခယျြနှင့်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်လာဖို့လွယ်ကူပါတယ်နှင့်အလတ်စား sudoku ပဟေဠိ Play!
•ဖုန်းများနှင့် tablet နှစ်ခုလုံးကိုအထောက်အကူပြု
တက်ဘလက်များအတွက်•ပုံတူများနှင့်ရှုခင်း mode ကို
နေ့စဉ် sudoku သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာကိုစတင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ! 1 သို့မဟုတ်2sudoku ပဟေဠိ, သင်သည်နိုးထသင့်ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်, သင်တစ်ဦးတန်ဖိုးရှိရှိအလုပ်လုပ်နေ့အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နိုင်ဖို့ကူညီရန်ကူညီပေးပါမည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်း application ကို Download လုပ်ပါနဲ့အော့ဖ်လိုင်း sudoku အခမဲ့ပဟေဠိကစား။
သင်တစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ sudoku ရောက်နေတယ်ဆိုရင် solver ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sudoku နိုငျငံတျောသညျမှကြိုဆိုပါ၏! သင်တို့၏ကောင်းသောအလေ့အကျင့် sudoku ဖြေရှင်းပါစေ။ ဒီနေရာတွင်ချွန်ထက်သင့်ရဲ့စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းသင့်ရဲ့အခမဲ့အချိန်ဖြုန်းနိုင်ပါ။ ပုံမှန်ဂိမ်းအလေ့အကျင့်ကိုသင်လျင်မြန်စွာတိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွက်အခက်ခဲဆုံးကို web sudoku ပဟေဠိနှင့်အတူပင်ဆကျဆံသူတစ်ဦးကိုမှန်ကန် sudoku မာစတာဖြစ်လာကူညီပေးပါမည်။
Sudoku.com - Free Game အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Sudoku.com - Free Game အား အခ်က္ျပပါ
Sudoku.com - Free Game ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Sudoku.com - Free Game အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.1.2
ထုတ်လုပ်သူ Easybrain Ltd
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://easybrain.com/policy.html
App Name: Sudoku.com - Free Game
လက်မှတ် SHA1: E9:B2:81:6E:BB:14:9F:EA:EA:FC:DE:C5:CC:2E:28:42:E5:50:8E:6B
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Easybrain Ltd
အဖွဲ့အစည်း (O): Easybrain Ltd
နယ်မြေ (L): Minsk
နိုင်ငံ (C): BY
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Minsk
Sudoku.com - Free Game APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ